သခင့်ထံသို့ သွားပါ - MYATMINGALAR
Myanmar Christian Online Magazine
Posted On : March 8, 2016 Published By : MYATMINGALAR
“ကိုးရီးယားလူမျိုးတွေကို မင်းတို့တွေ မြင်ဖူးကြလား”လို့ မေးရင်၊ “အလိုက်တာအ့ံရောလို့” မမကို ပြန်ပြောကြမှာ မြင်ယောင်သေးတယ်။ ကိုးရီးယားဇတ်ကား ကောင်းလေးတွေကိုကြည့်ပြီး သူတို့လူမျိုးတွေကို မြင်ဖူးကြ၊ သိထားကြပြီ မဟုတ်လား။
မမလည်း သူတို့လူမျိုးတွေရဲ့ ဓလေ့တစ်ခုကို သိထားတယ်။ ပြောပြမယ်နော်။ ကိုးရီးယားလူမျိုးတွေမှာ ဓလေ့တစ်ခုရှိတယ်တဲ့။ သူတို့မေ့ပစ်ချင်တဲ့ အကျင့်ဆိုးတွေကို စွန်ကလေးတစ်ခုအပေါ်မှာ ရေးလိုက်ကြတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီစွန်ကလေးကို ခပ်မြင့်မြင့်ကောင်းကင်ထက်ကို လွှင့်တင်လိုက်ကြတယ်တဲ့။ ဟိုးမမြင်ရတော့တဲ့ အမြင့်တစ်နေရာကို အဲဒီစာရေးထားတဲ့စွန်ကလေး ရောက်ပြီဆိုရင်တော့၊ စွန်လွှတ်ထားတဲ့ ကြိုးကို ညှပ်ပစ်လိုက်ကြတယ်တဲ့။ စွန်ကလေးကို ကောင်းကင်လေဟာနယ်ထဲမှာ ဖျောက်ပစ်လိုက်ကြတာပေါ့။ သူတို့တွေ ဘာကြောင့်ဒီလို လုပ်ကြတာလဲလို့ စဉ်းစားမိရဲ့လား။
စွန်ကလေးက သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကို ဟိုးအဝေးဆီ ယူသွားပေးပြီး၊ အဲဒီလို မကောင်းတဲ့အရာတွေ အကျင့်တွေကိုလည်း နောက်ထပ် မကျူးလွန်တော့ဘူး၊ မပေါ်လာနိုင် တော့ဘူးဆိုပြီး ယုံကြည်လို့ လုပ်ကြတာတဲ့။
အဲဒီလိုလုပ်လို့ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အပြစ်တွေ၊ မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေ ပျောက်သွားနိုင်လို့လား။ မမတော့ မယုံပါဘူး။ အပြစ်တွေကို တကယ်ပျောက်ကင်းအောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့့သူက ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာရှိတာပါ။ လူတွေရဲ့ ခွန်အားနဲ့ ဘယ်လိုမှ မဖျောက်ဖျက်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လည်း ဘုရားသခင်က လူသားတွေအတွက် ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုကို ပြင်ဆင်ပေးခဲ့တာပါ။ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်လက်ခံသူမှသာ အသစ်သောအသက်တာနဲ့ အသစ်သော ပြုပြင်ခြင်းကိုခံရမှာပါ။
ကျမ်းစာထဲမှာလည်း အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ရှိတယ်လေ။ တစ်ခါတုန်းက တစ်ဆယ့်နှစ်နှစ်လုံး သွေးသွန်ရောဂါဖြစ်နေတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့။ သူ့မှာ ရှိသမျှဥစ္စာတွေနဲ့ ရောဂါကို ကုပေမယ့် မပျောက်တဲ့အပြင် ရောဂါတောင်ပိုတိုးလာခဲ့တယ်။ (၁၂)နှစ်တောင် ရောဂါခံစားနေရတယ်ဆိုတော့ သိပ်ပြီးစိတ်ညစ်၊ စိတ်ပျက်နေရတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် သခင်ယေရှုရဲ့ သတင်းကိုကြားတော့ “ငါလည်းပဲ သခင်ရဲ့ အဝတ်တော်ကို တို့လိုက်ရရင်တော့၊ ငါ့ရောဂါတွေ ပျောက်သွားနိုင်တယ်”လို့ ယုံကြည်နေတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ သခင်ယေရှုလာတော့ လူတွေတိုးနေရတဲ့ကြားကပဲ အနောက်နားကနေ သခင်ရဲ့ အဝတ်တော်ကိုတို့လိုက်တယ်တဲ့။ အဲဒီခဏလေးအချိန်မှာပဲ သူ့ရဲ့ရောဂါတွေအားလုံး ပျောက်သွားတယ်လို့ သိရှိခံစားလိုက်ရတယ်။
သခင်ယေရှုကလည်း သူ့ကိုယ်ကနေ တန်ခိုးထွက်သွားတာကို သိလိုက်တော့ ဘယ်သူတို့သလဲလို့ မေးပြီး ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ၊ အဲဒီမိ်န်းမကလည်း ကြောက်ရွှံ့တုန်လှုပ်မှုတွေနဲ့ ကိုယ်တော့်ရှေ့မှာ ပျပ်ဝပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့အဖြစ်ကို ပြောပြလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ သခင်က “သင့်ရဲ့ ယုံကြည်ခြင်းက သင့်ရဲ့အနာကို ငြိမ်းစေပြီ”လို့ မိန့်တော်မူလိုက်တယ်။ ရောဂါသည် မိန်းမဟာ သခင့်ဆီသွားရင် ရောဂါပျောက်တယ်လို့ သိတာနဲ့ သွားခဲ့လို့(၁၂)နှစ်လုံးလုံး ခံစားခဲ့ရတဲ့ ရောဂါကနေ လွတ်မြောက်ခဲ့ရတယ်။
မောင်လေး၊ ညီမလေးတို့ရော ကိုယ်ကိုတိုင်မကြိုက်တဲ့ အကျင့်ဆိုးတွေကို ဖျောက်ဖျက်ချင်ရင် ဘုရားသခင်ကို ဆုတောင်းပြီး ပြောပြပါ။ (၁၂)နှစ်လုံး ရောဂါခံစားခဲ့ရတဲ့ မိန်းမတောင် ပျောက်ကင်းခဲ့ရပြီ။ ဒါကြောင့် မောင်လေး၊ ညီမလေးတို့မှာ ရှိတတ်တဲ့ တီဗီဂိမ်းစွဲတဲ့ အကျင့်တွေ၊ ဆေးလိပ်စွဲတဲ့အကျင့်၊ ရောဂါစွဲနေတဲ့အရာ မှန်သမျှကို ပျောက်ကင်းအောင် လုပ်ပေးနိုင်တာ ဘုရားသခင် တစ်ပါးတည်းသာ ရှိတယ်ဆိုတာကို သတိရပါ။ သိပြီဆိုတာနဲ့ သခင့်ဆီသို့ တကယ်ပဲ အရောက်သွားလိုက်ပါ။
အားလုံးကို ဘုရားသခင် ကောင်းချီးပေးပါစေ။
မှတ်ချက်။ ။ ကလေးပုံရိပ် ခရစ်ယာန်ရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်း၌ ရေးသားဖော်ပြခြင်းခံရဖူးသည်ကို ပြန်လည်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
http://kakyikhakway.blogspot.com/2011/02/blog-post_19.html မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
Posted in: Church School, StoryTagged : Children Story
* မျှော်လင့်ခြင်းတွေနဲ့ ရွက်လွှင့်ခဲ့ကြတယ် . . ....
ဘာကြောင့် ဘုရားကျောင်းကို ပုံမှန်သွားဖို့ လိုအပ်ပါသလဲ
အလုပ်များလွန်းသူတစ်ဦးအနေနဲ့ သင်ဘုရားကျောင်းကို ပုံမှန်တက်လေ့ရှိပါသလား။ လူအများစုက ဘုရား ကျောင်းမှာ...
https://www.youtube.com/watch?v=4ZtJQ_wIJqE အရောင်များရဲ့စကားသံ တေးရေး - ကျော်လင်းဦး တေးဆို...
https://www.youtube.com/watch?v=NnO6a7bw1RA ခရစ်စမတ်အချိန်အခါ တေးရေး - ကျော်လင်းဦး တေးဆို...
https://www.youtube.com/watch?v=R5F97m6dSiA ခရစ်စမတ်သတင်းကောင်း တေးရေး - ကျော်လင်းဦး တေးဆို...
ဗေဒင်နှင့် စိတ်ကုသခြင်း အပေါ် အသင်းတော်ရဲ့ သဘောထား
မေး။ ။လူကြီးတစ်ယောက်က ဗေဒင်ဟောတာလဲမှန်တယ် ၊စိတ်ဝေဒနာတွေကိုလည်း ကုပေးတယ်။ အဲဒီတော့ ကျန်မသိချင်တာက ဒီအရာတွေနဲ့ပက်သတ်ပြီး အသင်းတော်ရဲ့ သဘောထားကို သိပါရစေ။ သမီးမှန်မှန်ကန်ကန် ရှင်းပြချင်လို့ပါ။ ဖြေ။ ။ လူတွေဟာ မိမိအသက်အရွယ် ကြီးလာရင် ကျန်းမာရေးမှကောင်း ပါမလား။...
ယေရှု၏ မွေးနေ့ ရက်၊ လ၊ နှစ်တို့ကို ဖေါ်ပြပေးလို့ ရနိုင်ပါသလား၊ ဖေါ်ပြပေးနိုင်ပါက ယေရှုကို ကိုးကွယ်ပါမည်? ယေရှု၏ မွေးနေ့ကို မေးသောမေးခွန်းကြီးမှာ ၁၉၃၆ ခုနှစ်တွင် ခရစ်ယာန် တို့ရှုံးနိမ့်သွားသည်ဆိုသည့် ဝါဒပြိုင်ပွဲမှ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။...
အလုပ်များလွန်းသူတစ်ဦးအနေနဲ့ သင်ဘုရားကျောင်းကို ပုံမှန်တက်လေ့ရှိပါသလား။ လူအများစုက ဘုရား ကျောင်းမှာ ပုံမှန်၀တ်ပြုခြင်းအားဖြင့် သူတို့ပေးတာထက် သူတို့ပြန်ရတာ ပိုများတယ်လို့ ယုံကြည်ကြတဲ့အတွက် သွားရောက်ကြခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာ လေ့လာဆန်းစစ်ချက်အရ သိရပါတယ်။ ဒါဆိုမိတ်ဆွေ သင် ဘုရားကျောင်းသွားဖို့ စိတ်မပါဘူးလား၊ သွားဖို့ သင့်ကို...
ဇော်ဂျီတပသီတို့ ပျော်ပါးရာအရပ် ဟိမဝန္တာတောမှာ “သူယောင်” လို့ခေါ်တဲ့ နွယ်ပင်ကြီး တစ်မျိုးရှိသတဲ့။ အဲဒီ “သူယောင်” နွယ်ပင်ကြီးမှာ လူမိန်းမနဲ့သဏ္ဌာန်တူတဲ့ အသီးတွေရှိသတဲ့ သူယောင်သီးဟာ အလွန် လှတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ အဲဒီလိုအလွန်လှတဲ့ သူယောင်သီးတွေကို လူမိန်းကလေးလို လှည့်ဖြားပြီး...
အဝေးမှ ရထားတစ်စင်းသံကို ကြားရသည်။ သဲ့သဲ့ကြားရာမှ ကျယ်လာသည်။ “တူ-တူ-တူ”ဟူသော ဥသြသံနှင့်အတူ ဘီးတလိမ့်လိမ့်သံပါလာသည်။ နီးလာသည်။ ဥသြသံရှည်သည်။ ည၏ တိတ်ဆိတ်မူကို လှုပ်ခတ်သွားစေသည်။ လေတစ်ချက်တိုက်သည်။ ဓနိမိုးပေါ် ပြေးတက်သွားပြီး အမိုးရွက်များနှင့် တဖြတ်ဖြတ် မြည်အောင် ဆော့ကစားပြီးမှ...
“ဟယ် . . .ဒွေးမေလာပြီ . . . ဒွေးမေလာပြီ” ခြံဝတွင် အထပ်တစ်ပွေ့ တစ်ပို်င်နှင့် ဒွေးမေကို တွေ့လိုက်ရသဖြင့် ဝမ်းသာစိတ်ကို မထိန်းနိုင်ဘဲ အော်လိုက်မိသည်။ မိမိကိုယ်မိမိ သတိမထားမိခင် အပြေးဆင်းနေမိသည်။ “ဟဲ့...
အခန်း (၁) ကွန်တော် အခုတလော ကြားကြားနေရတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်။ မိန်းကလေး အတော်များများရဲ့ နှုတ်ဖျားမှာစွဲနေတဲ့ သီချင်း။ ဘာတဲ့ “ကိုယ်ရည်းစားဘေးနားမှာ တစ်ယောက်လုံးရှိတာတောင် ရှင်ကတော့ တခြားမိန်းကလေးတွေငေးကာ” တဲ့။ အဲဒီသီချင်းလေးကို ပြန်စဉ်းစားပြီး ကွန်တော့်ရဲ့ အဖြစ်ကို...
https://www.youtube.com/watch?v=4ZtJQ_wIJqE အရောင်များရဲ့စကားသံ တေးရေး - ကျော်လင်းဦး တေးဆို - နန်ဇမီအား(ရ်) #Sunday_School_Songs
https://www.youtube.com/watch?v=NnO6a7bw1RA ခရစ်စမတ်အချိန်အခါ တေးရေး - ကျော်လင်းဦး တေးဆို - မေနဒီအေး
https://www.youtube.com/watch?v=R5F97m6dSiA ခရစ်စမတ်သတင်းကောင်း တေးရေး - ကျော်လင်းဦး တေးဆို - Joel
ဘုန်းတော်ထင်ရှားရဲ့လား တေးရေး - ကျော်လင်းဦး တေးဆို - နန်ဇမီဆားရ် #SundaySchoolSong https://www.youtube.com/watch?v=zzgnHzonvbc&t=16s
ခရစ်တော်၏သက်တော်စဉ် (for Children)
Prince of egypt ဒီအန်နီမေးရှင်းဇာတ်လမ်းလေးမှာ Imdb7အထိရရှိထားပြီး မိသားစုနဲ့အတူကြည့်နိုင်တဲ့ ကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ။ မိတ်ဆွေအချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီမှုနဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်ရင် ဘာမဆိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကို မီးမောင်းထိုးပြထားတဲ့ ပညာပေးအန်နီမေးရှင်းဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ဇာတ်လမ်းအညွှန်းဆိုရရင်တော့ဖြင့် တစ်ခါကအီဂျစ်နိုင်ငံမှာ Moses နဲ့ Ramses...
ဘီစီ ၁၃၀၀ က တော်ဝင် မိသားစုဝင်စစ်သူကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ မိုးဇက်ဟာ ဟစ်တိုက်စ်စစ် တပ်ကို မင်းသားရမ်မက်ဇက်နဲ့ အတူ တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဖာရို ဘုရင်ဆေတီက မိုးဇက်နဲ့ ရမ် မက်ဇက်တို့တစ်ယောက်ကိုတစ် ယောက် ကယ်ဆယ်ရင်း ခေါင်း...